Nepal Auto यस्तो छ हालै नेपाल भित्रिएको जावा पेराक बाइक र यसको इतिहास - Nepal Auto
यस्तो छ हालै नेपाल भित्रिएको जावा पेराक बाइक र यसको इतिहास
८ चैत, २०७७
क्लासिक लिजेन्ड्सको आधिकारिक वितरक अग्नि ग्रुपको सहायक कम्पनी अग्नि मोटो इंक प्रालिले बीएस६ इन्जिनयुक्त जावा पेराक बाइक हालै नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । शुक्रबार देखि नेपाली बजारमा उपलब्ध भएको सो मोटरसाइकलका शोखिनहरू अब पहिलो फ्याक्ट्री निर्मित बब्बर पेराक बुक गर्न सनेछन् । अग्नि मोटो इंकको सबै शाखा र डिलर भएका स्थानमा टेस्ट राइडको लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जसमा काठमाडौं, बिर्तामोड, धरान, इटहरी, विराटनगर, लहान, पोखरा, नारायणघाट, बुटवल र भैरहवा सम्मिलित छन् । जावा मोटरसाइकल नेपालमा २०७७ असोज २७ गते पहिलो पटक भव्य र नवसिर्जनशील भर्चुअल लन्चिङका साथ प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यो बेला जावा क्लासिक र जावा फोर्टी टु बाइक उपलब्ध भएकोमा अब अर्को मोडलको रुपमा जावा पेराक उपलब्ध भएको हो । अहिले अग्नि मोटो इंकले नेपालको बजारमा सबैभन्दा धेरै चर्चित र पर्खाइ रहेको जावा पेराक ल्याएर सम्पूर्ण नेपालमा आफ्ना शाखा र डिलर भएको स्थानमा उपलब्ध गराएको छ । जावा पेराक बीएस–सिक्स ३३४ सीसी, सिंगल सिलिन्डर, लिक्विड–कुल्ड डीओएचसी इन्जिनसहित आएको छ, जुन ३० एचपी पावर र ३२ एनएम टर्क उत्पन्न गर्न सक्षम छ । जावा र जावा फोर्टी–टु मोटरका तुलनामा यसमा भएको ठूलो बोरका कारणले यो अधिक शक्तिशाली देखिन्छ, । यो इन्जिन सिक्स स्पिड ट्रान्समिसनसँग जोडिएको छ । स्टाइलअनुसार पेराक बबर बाइक हो । यो मोटरसाइकल ट्वीटेड चेसिस र स्विङ आर्मसहितको कम र लामो आकर्षक आकारको छ । बबर सौन्दर्यशास्त्रलाई ध्यानमा राखेर जावा पेराकसँग फ्लोटिङ सिंगल सिट छ, जसको मुनि गोलो ब्रेकलाइट छ । यसबाहेक, पेराकमा बार–एन्ड मिरर, काटिएको फेन्डर्स र काटिएको निकासा पाइप (चप्ड फेन्डर्स र चप्ड पाइप) तथा त्रिकोणीय उपकरण बक्स समावेश गरिएको छ । पेराकको अगाडिपट्टि सस्पेन्सनका लागि टेलिस्कोपिक फ्रन्ट फोर्क्स रहेको छ भने पछाडि मोनोशक सस्पेन्सन छ । दुवै पाङ्ग्राहरूमा सिंगल डिस्क ब्रेक रहेको छ । जावा पेराकमा ड्युअल च्यानल एबीएस पनि पाइन्छ । जावा पेराकको सुरुवाती मूल्य ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । जावाको नेपालस्थित डिलरको आधिकारिक वेबसाइट www.nepal.jawamotorcycles.com मार्फत बाइकलाई अनलाइन बुक गर्न सकिन्छ । जावा चेक गणतन्त्र, पूर्व चेककोस्लोभाकियाको मोटरसाइकल ब्रान्ड हो, जसको ९० वर्ष लामो विरासतसहितको इतिहास छ । कम्पनीले आफ्नो उत्कर्षका समयमा १२० भन्दा बढी देशहरूमा क्लासिक, राम्रो इन्जिनियरिङ गरिएका र फरक संरचनाका मोटरसाइकलहरू निर्यात ग¥यो । यो १९६० को प्रारम्भमा भारतीय बजारमा प्रवेश गरेको थियो । जावा मोटरसाइकलको दुईवटा पक्षहरू – यसका सुन्दर डिजाइन र सबल पर्फमेन्सको चरित्रले यसले धेरैको मन जित्नुका साथै धेरै विश्व उपाधी÷पद्वीहरू पनि जित्यो । पेरक नामको प्रयोग सबैभन्दा उत्प्रेरक पनि छ किनकि यो पछिल्लो शताब्दीको सबैभन्दा अन्धकारमय समयतिर फर्कन्छ जतिबेला चेकोस्लोभाकिया नाजीहरूको कब्जामा थियो । जावाको काम खतरानाक एसएसको कमान्डमा तिनीहरूका कर्मचारीका कार, डिस्प्याच बाइक र मोटरसाइकल–साइडकारको संयोजनका साथ भारी सैन्य सवारीसाधनका साथ शीर्ष अवस्थामा राखिएको थियो । यी सबैमा गेस्टापोको नाकैमुनि जावा इन्जिनियरहरू जोसेफ जोजिल र रुडोल्फ व्यकोकलले डा. जे. फ्रेको समूह नेतृत्वमा आफ्नो टिम (गोप्यताको शपथ) बनाइ युद्धका कालो बादलहरू सधैंभरि रहन सक्दैन भन्ने बुझेर आफ्नो नयाँ मोटरसाइकल विकास गरेका थिए । चेकहरूले आफ्नो उपकेन्द्र यति प्रभावकारी ढंगले काम गरेका थिए कि उनीहरूले आफ्नो नयाँ मोटरसाइकल विकास गर्न सक्षम नभइ यसको परीक्षण पनि गरिरहेका थिए (वेहरमाच फेग्टिस् र डीकेडब्लू ब्याज लगाएर) ताकि शत्रुताको युग समाप्त भएपछि, युद्धपछि युरोपमा पूर्णत नयाँ बाइकका रूपमा जावा पहिलो हुन तयार थियो । यस बाइकलाई पेराक नाम दिइएको थियो र यसले त्यहाँबाट चेक मोटरसाइकलका लागि सफलताको जग बसाल्यो । क्लासिक लिजेन्ड्भित्र डिजाइन टोलीद्वारा अधिकांश त्यही विधिहरू प्रयोग गरिएको थियो जुन क्लासिक मोल्डभन्दा अलि पर रहेर एकभन्दा अधिक तरिकाबाट सुक्ष्म ढंगले जाभाका लागि बनाइएको थियो । यो लामो छ, स्क्वाटर र यसका क्लासिक जोडीदार मोटरसाइकलहरूको तुलनामा यसमा पूरै फरक रुप छ । यसको पछाडिको डिस्क ब्रेक (रेयर डिस्क ब्रेक) पनि मानकको रूपमा आउँदछ जबकि साइड प्यानल र कस्टम श्राउडहरू फरक छ, जस्तो कि अगाडि र पछाडि मडगार्डहरू फरक हुन्छन् । म्याट ब्ल्याक र ग्रे फिनिस प्लसका साथ ती गोल्डन पिनस्टेप्सले जावा परम्परालाई अगाडि बढाउँछन्,् जबकि तैरिँदो छालाको सिट (फ्लोटिङ लेदर स्याडल) कलाको वास्तविक काम भएजस्तो देखिन्छ । ट्यांकीमा रहेको परेका शब्द, एउटा स्पष्ट कलात्मक स्क्रिप्टमा नामांकित गरिएको छ, जुन नाम बनाउने पाँचमध्ये दुई अक्षर उल्मायुटमुनि छन् । कन्सेप्ट बाइकमा अत्यधिक ध्यान दिइने स्ल्यासकट टेल सीधै खुल्ला निकास पाइपहरूमा समाप्त हुन्छ, अझै जुन शोरुम बाइकहरुमा देखिन्छ ।